सरकारी प्रयोगशालाले नधान्ने देखिइसक्यो, निजीलाई... :: विवेक राई :: Setopati
विवेक राई काठमाडाैं, जेठ १९
'क्वारेन्टिनमा रहेका ९ जनाको परीक्षण गर्दा ७ जनाको कोरोना पोजेटिभ देखिएको हामीलाई खबर आएको छ,' दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानमणि नेपालले सेतोपाटीसँग भने।
'दैनिक २ सय जाँच्दा पनि ६ दिनमा बल्ल सकिन्छ,' उनले भने। सुर्खेतको प्रयोगशालामा प्राविधिक कारणले परीक्षण स्थगित भएकाले त्यहाँका स्वाब समेत आफूहरूकहाँ आएको उनले बताए।
'९ जनाको स्वाब जाँच्दा नै ७ जनामा पोजेटिभ देखियो। २०० को जाँच गर्दा कतिमा देखिने हो, थाहा छैन। क्वारेन्टिनमा अझै २३०० मानिस छन्,' प्रमुख अधिकृत नेपालले भने, 'कसलाई संक्रमण छ, कसलाई छैन भन्ने नछुट्टिएपछि अब क्वारेन्टिनमै धेरैलाई कोरोना सर्ने डर भयो।'
यो चाप निजी क्षेत्रसँग भएका प्रयोगशालासँग सहकार्य गरेर सरकारले सहज पार्न सक्छ। निजी प्रयोगशाला चलाइरहेका डा. समिरमणि दीक्षित भन्छन्, 'हामीसँग पनि दुइटा पिसिआर मेसिन छ। जनशक्ति पनि छ। सरकारले अनुमित दिए हामी दैनिक ४ सय जनाको परीक्षण गर्न सक्छौं।'
'उहाँहरूले त्यो बेला चासो दिनुभएन। पछि चाप भयो भने सहकार्य गर्न सक्छौं मात्र भन्नुभयो,' उनले भने, 'अहिले पनि अनुमति पाए हामी परीक्षण सुरू गर्न तयार छौं।'
गत माघ ९ गते पहिलोपटक संक्रमण पुष्टि भएका युवकको नेपालमा परीक्षण दीक्षितकै प्रयोगशालामा भएको थियो। चीनबाट आएका उनको सुरूको परीक्षण भने हङकङ पठाइएको थियो। पछि फेरि 'क्रस चेक' का लागि नेपालमा पनि परीक्षण गरिएको हो।
सरकारले मूल्य र मापदण्ड 'प्रोटोकल' बनाएर निजी क्षेत्रलाई परीक्षण अनुमति दिए अहिलेको चाप धेरै हदसम्म कम हुने उनको दाबी छ।
नेपालमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रयोगशाला छन्। स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा कार्यवाही निर्देशिका-२०७३ का अनुसार 'ग्रेड ए' मा सूचिकृत प्रयोगशालाले मात्र पिसिआर परीक्षण गर्ने सक्नेछन्। साथै स्वाइन फ्लू, कोभिड-१९ जस्ता सरुवा रोग परीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ। सरकारले निजी क्षेत्रका प्रयोगशालालाई अनुमति दिए दैनिक १५ सयको कोरोना परीक्षण गर्न सकिने देखिएको छ।
सरकारले अनुमति दिए तत्काल ६ वटा 'ग्रेड ए' का प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षण गर्न सक्छन्। जसमध्ये उपत्यकाका चार वटा, बुटवल र पोखराका एक-एक वटा छन्।
ल्याबका प्याथोलोजिस्ट डा. जीवन अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, '१५ दिनका लागि भनेर लानुभएको हो, अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन। उहाँहरूले छुट्टै मेसिन ल्याउनुभयो भने हामी पनि यसबाट छुट्टै परीक्षण गर्न सक्छौं।'
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १९, २०७७, २१:४३:००